ပဲခူးတိုင်း၊ပြည် ခရိုင် အတွင်း မှာသောင်းကျန်းနေတဲ့ ကလေး သူခိုးတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပဲခူးတိုင်း၊ပြည် ခရိုင် အတွင်း မှာသောင်းကျန်းနေတဲ့ ကလေး သူခိုးတွေ
ပဲခူးတိုင်း၊ပြည် ခရိုင် အတွင်း မှာသောင်းကျန်းနေတဲ့ ကလေး သူခိုးတွေ
Posted by Hard Strike on Aug 5, 2011 in Copy/Paste | 24 comments
အခုတလော ပြည် ခရိုင် မြို့ နယ်တွေ တော်တော်များများမှာ ကလေးတွေ ကိုမြှူဆွယ်ဖျားယောင်းပြီး
ခိုးယူမှုတွေများနေတယ် လို့ ကြားသိရပါသည်။မူလတန်းကျောင်းတွေ တော်တော်များများမှာ ဖြစ်ပျက်နေပါတယ်။
ကြားသိရသလောက်ဆိုရင် ပြည်ခရိုင်အတွင်းက မြို့ တစ်ခုမှာ မြို့ ပေါ် အထက်တန်းကျောင်းခွဲ တစ်ခုတွင် ကျောင်း
ဆင်းချိန် တွင် ကျောင်းဆရာမ အယောင်ဆောင်ပြီးမူလတန်း ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်နှင့် ကျောင်းသူ ကလေး
မောင်နှမနှစ်ယောက်ကို စက်ဘီးပေါ်အတင်းခေါ်တင်နေစဉ် ထိုကလေး နှစ်ယောက်၏အတန်းပိုင်ဆရာမနှင့် တွေ့ ကာ
မေးမြန်းမည်ပြုစဉ် ကလေးတွေကိုထားခဲ့ပြီး စက်ဘီးကိုအတင်းနင်းကာထွက်ပြေးသွားကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
ပဲခူးရိုးမတောင်ခြေနား ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း မှ ကျောင်းသားကလေး(၂) ဦး ပျောက်ဆုံးနေသဖြင့် လိုက်လံရှာ
ဖွေရာတောစပ် တွင် ကျောင်းသားကလေးနှစ်ဦး၏ ရင်ခွဲပြီးအတွင်းကလီစာများမရှိတော့သည့်အလောင်း (၂)လောင်း
အားတွေ့ ရှိရ သည် ဟုကြားသိရပါသည်။နောက်ထပ်ကျေးရွာတစ်ခုတွင် မြေးအဘိုးနှစ်ယောက် နေထိုင်သော အိမ်သို့ 
သီလရှင် အယောင်ဆောင်ထားသူ ရောက်ရှိလာပြီး ရေသောက်ချင်လို့ ပြောသဖြင့်ရေတိုက်လိုက်ပြီး အဘိုးဖြစ်သူမှာ
အပေါ့အပါးနောက်ဘေးသို့ သွားစွန့် ရန်နောက်ဘေးသို့ သွားပြီး ပြန်ရောက်လာသည့် အခါ မြေးဖြစ်သူကလေးငယ်အား
လည်ပင်းညစ်ထားသော သီလရှင်အယောင်ဆောင်ထားသူ ကိုတွေ့ ရှိရပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်သို့ အကူအညီတောင်းမည်
လုပ်စဉ် ဓားဖြင့်ပေါက်ပြီး ထွက်ပြေးသွားကြောင်းကြားသိရပါသည်။အချို့ မြို့ နယ်များရှိကျောင်းများတွင် လုံခြုံရေးများ ချ
ထားရသည် ဟု ကြားသိရသဖြင့် မိမိ တို့ ၏ သား၊သမီး ရင်သွေးများအား အထူးသတိထား ဂရုစိုက်ကြရန် စေတနာရှေ့ ထား
ညီမလေးတွေမောင်လေးတွေကိုလည်း သတိပေးထားရဦးမယ် ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီပို့စ်လေးဖတ်ရလို့ ။ ရင်ခွဲခံရတဲ့ကလေးနှစ်ဦးရဲ့ မိဘတွေတော့ ရင်ကျိုးပါပြီနော်။ သနားပါတယ် ။ ကလေး တွေရဲ့ကလီစာတွေကို ဘယ်သူတွေကများ အကြင်နာတရား မရှိ ၀ယ်ယူနေလည်းမသိဘူး။ လုပ်ပေးတဲ့သူတွေ ငရဲကြီးမှာ မကြောက်
ကြဘူးလားမသိဘူး ။ ကလီစာတွေကို ဘာလုပ်ဖို့လဲမသိဘူးနော်။ ဆေးဖော်တယ် ဆိုလည်း လူဆို
တာတစ်နေ့ သေမှာပဲ မသေဆေးဖော်နေလို့လိုအပ်တာလား။ စားတယ်ဆိုလည်း ဇာတ်တူသား စား
လို့ လူတွေကြာရင်မျိုးတုံးကုန်တော့မယ်ထင်တယ်။ မညှာမတာ ဟွန့် …..
တကယ်ကြီးလားဟင်။ Media တွေမသိကြသေးတာများလား။
စေတနာ ရှေ့ ထားပြီးတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြို့ အမည်နှင့် ကျောင်းအမည် ၊ရွာအမည် များကို ဖော်ပြခြင်းမရှိသည်ကို ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးစေလိုပါသည်။ မိမိတို့ ၏ မြို့ နယ်များသို့ 
ထိုကဲ့သို့ ရောက်ရှိလာပါက ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်စေရန် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြည်မြို့ ကနေခြင်းပြန်သွားရတြ့ နေရာဘဲ.
မိတ်ဆွေတွေ ကော..မြို့ ကလူကြီးတွေ ကောမေးပြီးပြီး
သူကြီးရေ…ဒိလိုမမှနကန်တဲ့ သတင်းတွေ မတင်စေချင်ပါဘူး…
ဒါဟာတည်ငြိမ်နေတဲ့ မြို့ ကိုလာဖျက်နေတာနဲ့ တူပါတယ်ဗျာ
သက်သေဘာတခုမှမရှိဘဲ..ပါးစပ်ရာဇ၀င်တွေ မတင်ပါနဲ့ ….
ဒါဆိုဒီသတင်းက အမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့ ။ တင်တဲ့လူကလည်း စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ မသိလို့တင်လိုက်
တာနေမှာပါ ။အစ်မ ဖတ်ဖူးလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြန်ပြောလို့ရပါတယ် ။ ကြည့်ရတာ
ရွှေအိမ်စည်က ပဲခူးကထင်တယ် ။
Please, ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြန်ပြောလို့ရပါတယ် ။
ပါးစပ်ရာဇ၀င် မဟုတ်ပါ။ ၄၇က် ၊ ၅ ရက်အတွင်းဖြစ်ပျက်သွားသော သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဓားဖြင့်အပေါက်ခံရသော လူနာ သည် တိုက်နယ်ဆေးရုံတစ်ခုတွင် တက်ရောက်ကုသစြဲဖစ်ပါသည်။
မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကလေးမိဘတွေ တဆင့်စကားတဆင့်နား နဲ့ စိတ်ဆင်းရဲနေကြရမှာ..
နေပြည်တော်ဘက်လည်း တစ်လောကပြောနေကြတာပဲ…။ ဒါပေမဲ့ မဟုတ်ပါဘူး..။ ဘယ်သူလဲ ဘယ်ကလဲ သေချာအောင်လိုက်မေးကြည့်ရင် ယောင်ဝါးဝါး တွေ ဖြစ်ကုန်တာကများပါတယ်..။ မဟုတ်လောက်ပါဘူး…..။
အင်းဘယ်လို ဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ရင်ခွဲပြီး ကလီစာယူတယ်ဘဲထားပါ။ဆေးပညာအထောက်အကူမပါဘဲ ဘယ်နားမှ သုံးမရပါဘူး။အလကားဇတ်တူသားစားမလို့ ဆိုရင်လဲ နော်. တော်တော်ပျက်နေပြီ။ရွံ့ စရာလူတွေပါလား
ခွဲစိတ်တယ်ဆိုတာတော့ စဉ်းးစားစရာပဲ ဆိုက်ကိုတွေလားမသိဘူး
၂ရက်လောက်ရှိပြီ သတင်းတပုက် မှာ Vietnam ကနေ China ကိုကလေးလေးတွေခိုးပီးသွင်းတာတော့ဖတ်လိုက်ရတယ်
ကလေ တွေ ၈၀ကျော်တယ် ထင်တယ် link ရှာပီးရမှပြန်တင်ပေး အုန်းမယ်
သတင်းက ပထမတယောက်က ဆရာမယောင်ဆောင်တယ်။ ဒုတိယတယောက်က သီလရှင်ယောင်ဆောင်တယ် ဆိုတော့ မိန်းမတွေပေါ့. ။ခလေးပိုင်ရှင်တွေ ပါတ်ဝန်းကျင်နားမှာလူစိမ်းမိန်းမ
တွေ့ရင်သတိထားပြီးစောင့်ကြည့်ပါ။ ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေပါနဲ. ။အခုခေတ်ကြီးကဘယ်သူ.မှယုံလို.မရဘူး။
သတင်းအရင်းအမြစ် တိကျခိုင်လုံဖို့တော့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ လူတွေကို အပိုဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်နေရင်တော့ မကောင်းပါဘူး။
အာဏာပိုင်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်း.. သတင်းသမားတွေ.. ရှေ့မတင်ပေးသေးတော့… လူထုခမြာ..ကောလဟာသလား..ကောလဟလလား… ဘာလားမသိ..
ဒီသတင်းကို တစ်ခြားဆိုက်တွေထဲမှာလဲတွေရတယ် ဟုတ်သလိုပဲ
ဘာပဲပြောပြော မိမိရဲကလေးတွေကို မိဘတွေကပိုဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်
သတင်းစာထဲမှာ သတိထားမိတာတော့ အသက် ၅နှစ် ၆နှစ် နဲ့ ၁၀ကျော်သက် အရွယ်တွေ ပုံတွေနဲ့ လူပျောက်ကြေညာ ခဏခဏ ပါပါ နေတယ်။
ဒုစရိုက်သမားတစ်ယောက်ကတော. ဘာမှ အကျိုးအမြတ်မ၇ှိ၇င်မလုပ်ပါဘူး..သတ်တယ်ဆို၇င်တောင် ရင်ခွဲပြီး ကလီစာက ဘာလုပ်မှာလဲ။ သူတို.စားစရာမရှိငတ်နေလို. ချက်စားမှာလား..။ ယုတ္တိဗေဒနည်းအရပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို. ဖြတ်သန်းဖူးတဲ. အတွေ.အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ် ..သေချာတယ်…လုံးဝမဖြစ်နိုင်တာပါပဲ…ဘာကြောင်.လဲဆိုတော. လွန်ခဲ.တဲ. ၃ ၇က်ကမှ ကျနော် ပြည်မြို.က အဘိုးတွေဆီက ပြန်လာတာပါ။
Wednesday, July 27th, 2011 at 7:25 am UTC
ဟိုနေ့ကတွေတာ pictures ပါတယ် ခုပြန်ရှာတော မတွေ့ပြန်ဘူး
လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်တတ်တာတွေကို ပုံပြင်လေး(ဥပမာ)ပြောပြီး သတိပေးတယ်ပဲ သဘောထားကြပါ… အမှုခင်းတိုင်းဟာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အခြေနေ ရှု့ထောင့်ကနေပဲ ဖြစ်တတ်တာများပါတယ်… ဂလောက်ဆို ဒဘောပေါက်ကြမယ် ဟုတ်လား… ဒါပဲ မောတယ်
မှာ တစ်ရက်ထဲတင်ထားပါတယ်…။ အဲဒါက ဟိုမှာ တင်ထားတာက မိန်းကလေးနာမယ် ဖြစ်နေပါတယ်..။ တစ်ယောက်ထဲဆိုရင်လည်း နာမယ်တူ နဲ့ စာရေးတာက ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်လေ… ။